२८ मङ्सिर २०७६ | December 14, 2019
Friday, 13 Sep, 2019 10:23 AM
हुलाकी राजमार्गसहित महŒवाकांक्षी भारतीय परियोजना लामो समयदेखि अवरुद्ध छन्, नेपालीपक्षकै वेवास्ताका कारण । यतिबेला नेपालमा चीनको तरंग छाएको छ । विदेशमन्त्री वाङ् यी स्वदेश फर्किएका छन् । विदेशीले दिएका आश्वासन, कार्यान्वयन गर्न चाहेका विषय र त्यसबाट हामीले हासिल गर्ने उपलब्धी सुन्दा कथाझैँ लाग्छ । वास्तविकता हो कि, विदेशीका परियोजना आउँछन् । हाम्राले कमिशन, ढिलासुस्ती गरिदिँदा आएका विदेशी टिक्दैनन् । दाताहरु हैरान भएर फर्किने क्रम देखिएको छ ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको यसचोटिको भ्रमणलाई चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङको आसन्न भ्रमणको तयारीका रुपमा पनि हेरिनु स्वाभाविक थियो । तर, विदेशमन्त्रीकै भ्रमणले बिआरआईलगायतका विषयमा चीनले प्रस्तुत गरेको सकारात्मक आशयबाट बुझ्न सकिन्छ, चीन नेपालसँगको सम्बन्ध विस्तारप्रति झन् बढी आतुुर छ । नेपालबाट राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले यसै वर्ष गर्नुभएको चीन भ्रमणमा उताको राष्ट्रपतिलाई निमन्त्रण दिइए पनि अहिलेसम्म मिति तय भएको छैन । तर, विदेशमन्त्रीको भ्रमणपछि केही कुराहरुको स्पष्ट संकेत भने मिलेको छ । जस्तो कि, ट्रान्स–हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटीमा नेपाल र चीन जोडिएसँगै अब हिमाली क्षेत्रको पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी परियोजनासहित रेल्वे सञ्जाल विस्तारमा चीनले योगदान गर्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ । नेपाल बिआरआईसँग जोडिएकाले सम्पर्क सञ्जाल विस्तार र विश्व बजारको अर्थतन्त्रसँग नेपालको सोझो सम्बन्धलाई हाम्रो आर्थिक रुपान्तरणसँग गाँसेर हेर्न सकिन्छ । यसमा शंका छैन कि, नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनतामा चीनको सधैं समर्थन छ । नेपालले पनि निरन्तर एक चीन नीति अबलम्बन गर्दै आएको छ ।
भारतसँगको नेपालको सम्बन्ध झन् सामाजिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिकताका दृष्टिले उत्तिकै महŒवपूर्ण छ । दुई ठूला छिमेकीले दिएका अवसरलाई हामीले चिन्ने हो र उपयोग गर्ने हो भने हाम्रो समृद्धि धेरै टाढा छैन । तर, ‘माल पाएर चाल नपाएको’ भनेझैँ कमिशन र ढिलासुस्तीमै रमाउने भएपछि विदेशीहरु नै हामीबाट टाढा हुने क्रम जारी छ । यस्ता कमजोरी दुई तिहाईको वर्तमान सरकारले सच्याउने आशा गरौँ ।
​सगरमाथामा टिक्न सजिलो छ र सरकार !
बाटोको बिजोग, चिन्तनको दरिद्रता
सुरक्षालाई खेलाँची नसम्झौं
​संविधानमा त यो पनि भनिएको छ
​अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र बौद्धिक विलास
​प्रभु बैंक लिमिटेडको १८औं वार्षिक साधारणसभा
प्रभु बैंक लिमिटेडको १८औं वार्षिक साधारण सभा विभिन्न निर्णयहरु पारित गर्दै मसिंर ६ गते शुक्रबारका दिन सम्पन्न भएको छ…
​पुलिसमा यस्तो भइरहन्छ पलपल
​अध्यक्षलाई यस्तोसम्म अप्ठ्यारो
​पञ्चायत ‘फर्कने’ पीर
​कालापानी जान खै त आदेशको कागज ?
​कतिपय मन्त्रीका अधिकार कटौती
​डण्डा हान्दाहान्दै आइलाग्ने झण्डा
धीरेन्द्रको घर ढालेर धमाधम